Raisul wasaare xassan cali kheyre ayaa kulan mira dhal ah la yeeshey odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado.
June 27, 2019 admin Wararka Caalamka 0
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa xalay iyo maanta waxa uu magaalada Cadaado kulamo wadatashi ah kula yeeshay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka deegaannada Galmudug.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulamada wadatashiga ah isugu yeeray hoggaanka dhaqanka ayaa u sheegay muhiimmada ay u leeyihiin dhameystirka hannaanka lagu taabbagelinayo Galmudug mideysan oo qeyb ka noqota horumarka Soomaaliya. Waxa uu ballan qaaday in talooyinka odayaasha iyo wadatashigooda uu aasaas u yahay tallaabooyinka xiga ee la qaadayo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale dhagaystay talooyinka odayaasha dhaqanka ee ku aaddan dhismaha iyo xoojinta hay’adaha Dowlad Goboleedka Galmudug.
Odayaasha Dhaqanka ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga mahadceliyay booqashada uu ku yimid, wadatashiyada uu dhaqanka la yeeshay iyo dadaalka xooggan ee uu ku bixinayo nabadeynta iyo dhameystirka dhismaha hay’adaha dowliga ah ee Galmudug iyaga oo ka codsaday in uu sii wado wadatashiyada uu bulshada la yeelanayo.
Kulamada uu Ra’iisul la yeeshay odayaasha dhaqanka ayaa waxaa goob joog ka ahaa qaar kamid ah xildhibaannada iyo Seneterada deegaan doorashadoodu tahay Galmudug.
Raisul wasaare xasan cali kheyre ayaa xariga ka jarey xarumo ciidan ee laga dhisey magaalada cadaado.
Madaxweyne Farmaajo oo hambalyada Xuska Maalinta Xorriyadda u diray Dowladda iyo Shacabka Jabuuti
Wasaaradda caafimaadka soomaliya ayaa 6 bilood ka dib horumar balaaran ka sameysay cusbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee banaadir.
Wasiirka amniga soomliya ayaa sheegey inay howlgalo ka dhan ah kooxda shabaab ka bilaabayaan xeebaha galmudug.
Shir ku saabsan xogta kheraadka badda soomaliya oo muqdisho laga furey.
Shacabka oo taageero u muujiyey dhismaha degedda hobyo.
Ciidanka xooga oo 20 ka mid ah koxda shabaab ku diley gobolka shabeelaha hoose.